Miandry fitsaram-bahoaka | NewsMada
Mbola tantara lavabe manaraka ny arabe ity resaka fitsaram-bahoaka ity eto amintsika. Nilaza ny avy amin’ny polisim-pirenena, tamin’ny alalan’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, fa tsy manaraka lalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka eto amintsika. “Vonona ny hiady amin’izany ny polisy”, hoy izy, saingy mila mitandrina mba tsy avy amin’izy ireo indray no hahatonga ny olona hanao fitsaram-bahoaka. Tsy nisy kosa anefa ny vahaolana mivaingana natolotr’izy ireo amin’ity ady amin’ny hatezeram-bahoaka ity. Inona tokoa ny vahaolana amin’ity raharaha ity?
Olam-piarahamonina saro-bahana ka na mpitondra, na mpahay lalàna, na mpahay fiarahamonina, tsy manan-kambara momba ny firongatry ny fitsaram-bahoaka. Samy tsy mahita ambara ankoatra ny filazana fa vokatry ny krizy eto amin’ny firenena, tsy fahatokisana ny mpitondra, sns, ny mahatonga izany. Famonoana olona voalaza fa jiolahy, mitohy amin’ny fanafihana tobin’ny mpitandro filaminana raha tsy manaiky hanao ny sitrapon’ny vahoaka, ka mandray andraikitra iretsy farany. Vao mainka ilazana fa miala amin’ny mpitandro filaminana ny fahatokisan’ny vahoaka.
Fa iza tokoa moa izany no azon’ny vahoaka itokisana? Samy miseho azy ho manana vahoaka sy hoe atokisan’ny vahoaka na ny mpitondra, na ny tsy miandany amin’ny fitondrana, na ny mpanohitra. Ho hita eo tokoa izay tena tian’ny vahoaka fa mila mahandry fitsaram-bahoaka. Na ry zareo hotsarain’ny vahoaka amin’ny alalan’ny fifidianana, na ho tratry ny fitsaram-bahoaka tahaka ny mahazo ireny olona voatondro fa olon-dratsy ireny.
Ny olana amin’ity raharaha ity mantsy, mety ho tondro molotra fotsiny dia mety hanaovan’ny olona fitsaram-bahoaka. Olon-tsotra mety ho tratran’ny tondro molotra ka ho faty. Mpitandro filaminana mety ho tratran’ny trondro molotra (efa nisy tratrany), mety ho faty. Ary ry zareo mpitondra sy mpanao politika ireo, tsy maintsy ho tratry ny fitsaram-bahoaka, ka asa raha ho faty?